Nakaton’ny mpandrindra ny Aterineto ao Malezia ny kaonty Twitter taorian’ny fiparitahan’ny sioka manafintohina · Global Voices teny Malagasy
Voalaza fa novidina tamin'ny zatovo iray tamin'ny vidiny 320$ ilay kaonty Twitter
Voadika ny 20 Janoary 2021 11:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Português, Español, English
Vaomieran'ny Serasera sy ny Haino Aman-jery Maleziana. Loharano: Facebook
Lasa nalaza tao amin'ny Twitter ny Vaomieran'ny Serasera sy ny Haino Aman-jery Maleziana (MCMC) ny 12 Janoary lasa teo taorian'ny nandefasan'ireo mpisera ny sioka mankahala vehivavy sy manavakava-bolonkoditra avy amin'ny kaontin'izy ireo ofisialy tamin'ny taona 2014. Namoaka fanambarana nandà ny fahamarinan’ireo sioka ireo talohan'ny nanakatonany ny kaontiny Twitter ny MCMC taty aoriana.
Rehefa nanambara ny fahamehana ny governemanta Maleziana vokatry ny tranganà COVID-19 nirongatra dia nilaza tamin'ireo mpiseran'ny aterineto, indrindra ireo izay manohitra ny torolàlana vaovao ny MCMC mba haneho fanajana amin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo ao amin'ny tambajotra sosialy. Nampitandrina izy ireo fa ho saziana ireo izay mamoaka fanamarihana manala baraka amin'ny “volonkoditra, amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, ary amin'ny fivavahana”. Nanome baiko ny besinimaro ihany koa izy ireo hanao tatitra ireo mpisera aterineto izay manao fanamarihana manafintohina.
Saingy ora vitsy taty aoriana, nalaza tao amin'ny Twitter ny #MCMC rehefa nipoitra an-tserasera ny pikantsary mampiseho ny siokan'ny kaontin'ny MCMC tamin'ny taona 2014 izay nisy fanalam-baraka sy fanaratsiana ny vehivavy sy ny foko vitsy an'isa. Vetivety dia nanakatona ny kaontiny ny MCMC, namoaka fanambarana fa ireo mpijirika no tompon'andraikitra tamin'ireo sioka, ary farany nanafoana ilay kaonty.
Ny sasany nisalasala tamin'ny filazàna fa voajirika ny kaonty. Nanoratra tao amin'ny SoyaCincau.com i Alexander Wong hoe:
Efa taloha ela be ireo bitsika manafintohina ireo raha jerena ny datiny. Toa manana fahaizana mamerina ny fotoana ny mpanao ratsy raha tena voajirika tokoa izany. Raha ny zavatra fantatray dia tsy azo atao ny manemotra ny datin'ny sioka fa afaka atao kosa ny mandahatra ny sioka hoavy.
Nitatitra ihany koa i Malay Mail fa tanora iray no tompon'ny kaontin'ny MCMC ary avy eo namidiny tamin'olon-kafa tamin'ny sarany 1.300RM (320 dolara) tamin'ny taona 2015.
Farak'izay mampihomehy. Ny kaonty Twitter an'ny mpandrindra ny Aterineto Maleziana dia fanovana endrika ny kaonty manokan'ny @Nazrulllhakim (azo antoka fa novidina ho an'ny mpanjohy? Tamin'ny fomba ahoana ? Nahoana ? Aiza ny vola?) Fa mihoatra noho izany, tsy niasa saina akory izy ireo tamin'ny famafana ireo siokan'ilay kaonty taloha.
Tsy mazava ny fomba na ny antony mahatonga ilay zatovo hamorona solon'anarana Twitter izay nampiasaina ho kaonty ofisialin'ny masoivohom-panjakana taty aoriana. Tsy fantatra ihany koa ny fomba nanaovana ny ‘fivarotana’ ilay kaonty Twitter satria mifanohitra amin'ny fitsipika napetrak'ilay sehatra izany.
Niala tsiny tamin'ny sioka manafintohina nataony ilay mpisera Twitter, @NazruiHakim, izay nilaza fa tompon'ny kaonty MCMC tany am-boalohany:
Miala tsiny tamin'ireo zavatra nolazaiko tany aloha aho. Efa taloha ny sioka ary tsy tadidiko akory izay nitranga. 7 taona lasa izay. Hadisoako ny nampisy ny sioka. Miala tsiny amin'ireo rehetra voarohirohy tamin'izany aho.
Nilaza ihany koa izy fa tsy nampoiziny ho eo am-pelatanan'ny masoivohom-panjakana ny kaontiny.
Nanasongadina ny maha-tompon'andraikitra ny MCMC i Ameera Rosli raha nanoratra ho an'ny tranonkala Juice:
Ny tandrevaka ataon'ny MCMC amin'ny maha mpandrindra ny aterineto azy no hadisoana miharihary amin'ity tantara ity.
Mahavaka ny saina hoe nahoana ny MCMC, masoivohom-panjakana misahana ny fanaraha-maso ny fampiasantsika ny aterineto, no voalaza fa nanadino ny famafana ny angondrakitra manokana sy ny vaovao avy amin'ny kaonty azony.
Tokony ho fantatry ny MCMC ihany koa fa manitsakitsaka ny fitsipika napetraky ny Twitter ny fifanakalozana kaonty.
9. Inona no nitranga tamin'ny tandrevaka nataon'ny MCMC nividy kaontin'olona nefa tsy namafa ireo sioka tany aloha izay tsy fahaizana. Manafintohina ny fanitsakitsahan'izy ireo ny fitsipika napetraky ny Twitter tamin'ny fahazoana kaontin'olona iray izay tsy menatra amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra, ny fankahalana vehivavy, tsy tia sola loha
Nanameloka ireo mpijirika tamin'ireo sioka manafintohina ny MCMC.
Manentana ny olona mba tsy ho voasarik'ireo hafatra mampiahiahy, mahatsiravina ary manala baraka izay nalefa tao amin'ny kaonty.
Nivoady ihany koa ny MCMC fa hanadihady momba ilay olana ka nahatonga azy ireo hanapa-kevitra hanakatona ilay kaontiny Twitter. Hoy ny minisitry ny MCMC, Datuk Saifuddin Abdullah tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny fampitam-baovao:
Ho jereko akaiky ny olana niparitaka be momba ny sioka tsy mendrika efa taloha izay nalefa tamin'ny taona 2014 ary mifandray amin'ny kaonty Twitter ofisialin'ny MCMC.